May 9, 2021 - Babal Khabar
May92021 by EditorNo Comments
मुख्यमन्त्री गुरूङले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसले भन्यो- अब हामी खुशीको साथ बनाउँछौं नयाँ सरकार
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली।कांग्रेस संसदीय दलका नेता गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएको बताएका छन्। ‘उहाँलाई अल्पमतमा परेछु भन्ने बल्ल लागेछ, त्यही भएर राजीनामा आयो’, उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘तीन दिनभित्र हामी नयाँ सरकार बनाउँछौं।’ मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छिन्। विपक्षी दलका नेता नेपालीले संसदको विशेष अधिवेसन मुख्यमन्त्री गुरुङको राजीनामासँगै निस्कृय भएको बताए। ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, अब विशेष अधिवेसन निस्कृय भयो’, उनले भने। संसदको हिउँदे अधिवेसन चल्दाचल्दै अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले बैशाख १ गते प्रदेश सभाको अधिवेसन अन्त्य ग
कसरी खुस्कियो ११ दिनमै मनाङेको मन्त्री पद हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएका छन् । आफुविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको मतविरुद्ध बहुमत पुर्याउन नसक्ने भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । प्रदेश प्रमुख सीता पौडेललाई उनले राजीनामा दिएका हुन् । अविश्वासको मतमा सोमबार मतदान हुँदैछ । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै सबै मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् । ११ दिन अघि युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएका दीपक मनाङे(राजीव गुरुङ) समेत पदमुक्त भएका छन् । मन्त्री नियुक्त भएकै दिन दुई हप्तामै यो सरकार ढल्न सक्ने उनले बताएका थिए । प्रदेश प्रमुख पौडेलले राजीनामा स्वीकृत गरेर तीन दिनभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि समय दिएकी छिन् ।
दुखद खबरः कोरोनाको सं’क्र’मणको कारण आज मृ’त्यु हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च,कतिको मृ’त्यु भयो त ?
काठमाडौं / पछिल्लो २४ घण्टामा थप ८८५० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । १८ हजार ७८७ पीसीआर परीक्षणमा ८ हजार ७७७ जना र ५०६ एन्टिजेन परीक्षणमा ७३ जना गरी ८ हजार ८५० पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ । पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ५२ जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर विभिन्न मितिमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको र सरकारी तथ्यांकमा समावेश नभएका २६ जना रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । यसरी गणना गर्दा आइतबार मृतक संख्या ८८ रहेको छ । आइतबार देशभर गरी ८८ हजार १६० जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । जसमध्ये ८१ हजार ४३० जना होम आइसोलेसनमा र ६ हजार ७३० जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । साभार : purbeli news
चीनमा कम्युनिष्टको नेता भएर बिलासी जीवन जिएको कारणले २७० जना कम्युनिष्ट नेता कारवाहीमा
बेइजिङ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी चीनको सर्वोच्च निकायले भड्काउ एवं सुखभोगी जीवनशैली अपनाउने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको जनाएको छ । यस वर्षको शुरुदेखि हालसम्म २७० जनामाथि कारबाही गरिएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । प्रत्येक १० वटा मुद्दामध्ये नौ वटा मुद्दा भड्काउ र सुखभोगसँग सम्बन्धित रहेका छन् । आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशित विवरणमा अधिकांश मुद्दामा संलग्न व्यक्तिले महङ्गा सामान, नगद उपहार वा गिफ्ट लिएको उल्लेख छ । प्रकाशित मुद्दाहरुमध्ये ४६.८ प्रतिशत अनुशासन उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित छन् । स्प्रिङ फेस्टिवल, ड्रागन बोट फेस्टिवल, मिड–अटम्न डे र नेसनल डे समेतका प्रमुख चिनियाँ पर्वहरुमा पार्टीका नेताहरुबाट अनुशासन उल्लङ्घन भएको पाइएको छ । आयोगले भ्रष्ट अधिकारीहरुमाथि दण्ड सजाय सिफारिस गर्नुका सा
केपी ओली नै पुन प्रधानमन्त्री हुने पक्का, यस्तो छ अङगणित हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री बन्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सपना तत्काल साकार नहुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले सरकारले लिन लागेको विश्वासको मत असफल गराई प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाको इच्छामा जनता समाजवादी पार्टी अवरोध बनेको छ । त्यस्तै केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गरी नामोनिसान मेट्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेकै नेता माधव नेपाल लगायतको सपना फेरि टुट्ने देखिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारको पक्ष र विपक्षमा दुवै तर्फ मतदान नगर्ने भएको छ । जसपाको यो निर्णयसँगै देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने सपना तत्काललाई टुट्ने भएको छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई थप टाउको दुखाइ बन्ने भएको छ । सरकारको पक्षमा जाने कि विपक्षमा जाने भन्ने विवादमा फसेको जसपाले पार्टीलाई विभाजनमा जा
दुखद खबर ! ५५ जना कलिला बिद्यार्थीहरुको भयो यसरी एकै चिहान
अफगानिस्तानमा ५५ जना कलिला बिद्यार्थीहरुको एकै चिहान बनाइएको छ । अफगानिस्तानका सरकारी अधिकारीहरूले भनेका छन् कि पश्चिम काबुलको एउटा स्कूलमा भएको ब म बि ष्फो टमा कम्तिमा ५५ जना मानिस म रे का छन् । त्यसमा धेरै जसमा छात्राहरू विश्वास गरिन्छ घटनामा कम्तिमा १५० जना घाइते भएको बताइएको छ जुन घटना दिया ए बर्चीको शिया बहुसंख्यक टोलमा भएको थियो । कुनै समूहले अझै यो जिम्मेवारी लिएको छैन । विद्यालय तीन सिफ्ट सञ्चालन हुने गर्दछ, जसमध्ये दोस्रो सिफ्ट छात्राहरूको हो, शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नाजिबा अरियनले भनिन् । काबुलको दश्त ए बार्ची क्षेत्रमा भएको भयावह ह म ला एक घृ णि त कार्य हो, ईयूको मिसन अफगानिस्तानले ट्विटरमा भनेको छ । बालिका विद्यालयमा मुख्यतया विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्नु भनेको अफगानिस्तानको भविष्यमा आ क्र म ण गर्नु हो । सामाजिक सञ्जालमा सय्यद अल शहदा स्कूल अगाडि सडकमा र ग त का दाग भएका
वीर अस्पतालले करारमा कर्मचारी मागेपछि कोरोनाको बेला आवेदन दिनेहरुको भीड [तस्बिरहरू]
यस्ता १० काम गर्नेलाई हुन्छ मृगौला बिग्रिने खतरा
काठमाडौँ । किड्नी अर्थात मृगौला शरीरको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो । यसले शरीरमा रगत सफा गर्ने देखि, हार्मोन बनाउने, खनिज सोक्ने, मुत्र उत्पादन गर्ने, टक्सिन अर्थात खराव पदार्थहरुलाई शरीरबाट निकाल्ने तथा एसिडको सन्तुलन बनाउने जस्ता काम गर्छ । यहाँ हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने १० गल्तीको चर्चा गरिएको छ जसले मृगौलालाई हानी पुर्‍याउँछ । १. पानी कम पिउने : यदि तपाइँ नियमित पानी पिउने गर्नु हुन्न भने यसको सबै भन्दा पहिलो र खराव प्रभाव मृगौलामा पर्छ । पानीको अभावले गर्दा मृगौलाले रगत सफा गरेर फोहोर फ्याँक्न कठिन हुन्छ । यसले उल्टो परिणाम दिन्छ शरीरमा टक्सिन जम्मा हुन्छ । २ नून बढी खानामा चर्को नून खाने बानी छ भने यसले रक्त चाप बढाउँछ । यसले मृगौलामा दवाव पैदा गर्छ । तपाँइले दिनमा ५ ग्राम भन्दा बढी नून खानु हानिकारक छ । ३ पिसाव रोक्ने : यदि पिसाव आउँदा पनि पछि जाउँला भनेर बस्ने बानी छ भने
इटहरी / अमेरिकाको डाइभरसिटी भिषा डिभी लोटरी २०२२ को नतिजा सार्वजनिक भएको छ। शनिबार राति ९ः१५ बजेबाट नतिजा हेर्न सकिने नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । दूतावासले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसबारे जानकारी गराएको हो । २०२२ का लागि खोलिएको डिभिको नजिता आज सार्वजनिक भएको हो । आवेदनको नतिजा https://dvprogram.state.gov/ मा गएर हेर्न सकिनेछ ।
काठमाडौँ — पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको संवादले सफलता नपाएपछि एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहका सांसद राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यो समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको शनिबार बसेको बैठकले सामूहिक राजीनामाको निष्कर्ष निकालेको हो । पार्टीलाई जीवन्त र एकताबद्ध राख्न गरिएको अन्तिम प्रयासमा ओली पक्ष उदासीन भएपछि राजीनामा दिनुको विकल्प नभेटिएको नेता माधवकुमार नेपालले बताए । नेता नेपालका अनुसार शनिबारको बैठकमा नेताहरूले ओली कुनै पनि हालतमा नसच्चिने र उनको जालोमा पर्न नहुने बताएका थिए र त्यसमा सबै सहमत छन् । ‘वार्ता र सहमतिका प्रयास भएका हुन् तर सहमतिका लागि ओलीजी तयार देखिनुभएन,’ नेपालले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसैले हामीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं, भोलि (आइतबार) एकपटक बैठक बसेर राजीनामा दिन्छौं ।’ नेता नेपालले फागुन २८ गते ओली समूहले एकलौटी